Olee otú Idozi Common iCloud mmekọrịta Issues?
1.When Ị Pụghị banye na Your iCloud
2.When ekwentị gị Ichekwa Up Iji The iCloud
3.When Ị Pụghị Download Site iCloud?
4.Why iCloud Photos Ọ bụghị syncing?
5.Why iCloud Ike Weghachi The ndabere?
Kasị Apple ọrụ na-adaberesi ha iCloud ọrụ dị ka ọ bụ ụzọ magburu onwe ya na-ha data kwadoo ma na ị nwere a repository maka na ịchekwa faịlụ. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ mmekọrịta mbipụta nke ị nwere ike na-eche ihu na ebe a na anyị na-aga obibi ụfọdụ nke ndị nkịtị mmekọrịta mbipụta nke a ọtụtụ Apple ọrụ nwere mgbe mkpesa banyere.
Part 1 mgbe ị na ike banye na Your iCloud
Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike banye na gị iCloud na ekwentị gị, e nwere ike dị iche iche ihe mere otu ihe ahụ. Nzọụkwụ mbụ bụ ịchọpụta nsogbu na mgbe ahụ anya n'ihi na a ngwọta.
Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime Atụmatụ mkpa ka ị na-uche.
Lelee na capslock isi na-adịghị agbanwuru.
Ugboro abụọ ego ma gị na aha njirimara na paswọọdụ gị
Ọ bụrụ na ị nwere nzọụkwụ abụọ Nyocha nyeere, jide n'aka na ị n'ụzọ ziri ezi tinye koodu nke e zigara ngwaọrụ gị.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nke ndị a ọrụ na ị na-ada icheta paswọọdụ gị, ị nwere ike họrọ iji tọgharịa ya, site na-eso nzọụkwụ ndị a.
1. Gaa m Apple id site na ịpị ebe
2. Họrọ fọdụrụ paswọọdụ gị njikọ
3. Ị ga-kpaliri ịbanye Apple id. Itinye otu na-anọgide na.
4. Ugbu a, e nwere ụzọ atọ nke i nwere ike ịgbanwe paswọọdụ gị.
a. Ị nwere ike iji 'aza gị nche ajụjụ' na wee soro ntuziaka iji tọgharịa paswọọdụ.
b. Ị nwere ike iji 'email Nyocha' ebe ị ga-eziga ntuziaka na gị email ma ị nwere ike tọgharịa paswọọdụ.
c. Ị nwere ike iji 'abụọ nzọụkwụ nkwenye' iji tọgharịa ya dị ka mma.
Part 2 Mgbe ekwentị gị Ichekwa Up Iji The iCloud
Ukwuu n'ime, nkwado ndabere na mpaghara gị data ka iCloud bụ akpaka, ma ọ pụrụ ada n'oge dị iche iche n'ihi na ná mgbanwe nke ihe. Ọ pụrụ ịbụ enweghị njikọ Ịntanetị ma ọ bụ ọbụna enweghị ohere nchekwa. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ị ​​nwere ike họrọ ndị na-esonụ ngwọta.
1. The iPhone-apụghị kwadoo n'ihi na e nwere bụghị otutu nchekwa dị
Ọ bụrụ na ị na-enweta nke a na ozi; ọ pụtara na ị na ike gwụrụ gị iCloud ohere nchekwa. Ị kwesịrị ị na-edozikwa ụfọdụ n'ime iCloud data site ịlụ Bibie nke na-achọghị faịlụ na-agbalị ndabere ọzọ. Alternately, ị pụrụ ịzụta ọzọ ohere kwa.
Iji ihichapụ faịlụ site na iCloud, na-aga ntọala na iCloud. Ugbu a ịkwaga nchekwa wee pịa on jikwaa nchekwa. Hichapụ faịlụ na ị chọrọ ikpochapụ maka azọpụta ohere.
2. Lelee gị Wi-Fi njikọ
Otu n'ime isi ihe mere gị na iPhone bụghị akwado ọdịnaya nwere ike ịbụ nsogbu gị Wi-Fi njikọ. Mkpa ka ị na-ahụ na ekwentị gị na-ekpochi, plugged na na kwa jikọọ gị Wi-Fi. A ga-enyere akpaaka ndabere ka ígwé ojii sava.
Nkebi nke 3 mgbe ị na ike Download Site iCloud?
Mgbe ụfọdụ, ị pụrụ ịhụ na gị iPhone adịghị ekwe ka ị download si iCloud. E nwere ike ịbụ dị iche iche ihe nke iduga njehie a. Ọ nwere ike na-ewute ewute n'ihi nbudata si iCloud enyere na mfe syncing nke faịlụ ebe dị iche iche Apple ngwaọrụ.
-Esonụ na-nzọụkwụ na-eso obibi nsogbu a.
1. Mgbe ụfọdụ, mgbe gị iPhone bụ emelitere ka ọhụrụ version ma ọ bụ femụwe, i nwere ike na-eche ihu nke a nke. Ya mere ka ọ na-ezo aka ego ọhụrụ femụwe update nke dị na nwere otu. Mgbe i na-emelite, na-agbalị na ibudata ọzọ na nsogbu kwesịrị idozi.
2. Ọ bụrụ na n'elu nhọrọ adịghị arụ ọrụ, na-agbalị ma jide n'ụlọ button tinyere ike bọtịnụ n'out oge ruo mgbe Apple logo-egosi. Nke a bụ ike nrụpụta na ike mgbe idozi nke.
3. N'ikpeazụ, jide n'aka na ị na-elele na ị na-jikọọ na njikọ Ịntanetị.
Nkebi nke 4 Gịnị mere iCloud Photos Ọ bụghị syncing?
Ọ bụrụ na ị nyeere akpaaka ndabere, foto gị kwesịrị na-akpaghị aka mmekọrịta ka iCloud nkesa. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ ndị mmekọrịta nwere ike ịkwụsị n'ihi iche iche ihe. Ọ nwere ike na--mere aka ma ọ bụ i nwere ike na-agba ọsọ nke ohere nchekwa. Na-esonụ bụ nzọụkwụ a ga-agbaso maka emeso a nke
1. Gaa ntọala na mgbe ahụ kwaga iCloud. N'okpuru iCloud, pịa photos.
2. Tulee ma ọ bụrụ na m foto iyi agbanwuru. Ọ bụrụ na ọ bụ na, gbanyụọ ya wee pịa on Nhichapụ.
3. Ugbu a, gbanwee m foto iyi na ọzọ.
4. The oge ọzọ ị pịa foto, ha ga-akpaghị aka kwadoo gị iCloud.
Alternately, ị nwere ike ime a ike nrụpụta na ekwentị site na ịpị n'ụlọ na ike isi ọnụ ruo mgbe Apple logo-egosi. Nke a okosobo nwa oge nsogbu, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla.
Ọzọkwa, ego gị dị nchekwa specie gị iCloud akaụntụ. Mkpa ka ị mara na iCloud naanị echekwa ndị ọhụrụ 1000 foto site na foto gị iyi
Part 5 Gịnị mere iCloud Ike Weghachi The ndabere?
Mgbe ụfọdụ, ị ga-ahụ n'agbanyeghị na nkwado ndabere na mpaghara, iCloud gaghị enwe ike iji weghachi ya. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ị ​​ga-otu ugboro ọzọ mkpa iji na-dị iche iche nzọụkwụ. Ọ pụrụ ịbụ nwa oge njehie ma ọ bụ nsogbu gị software.
1. Ị ga-ahọrọ a ike nrụpụta nke ekwentị gị site n'ịgba na n'ụlọ na ike bọtịnụ n'out oge.
2. Nke abuo, ị pụrụ ịgbalị ibudata ọhụrụ femụwe gị iPhone na-eme ka n'aka na i nwere ndị ọhụrụ melite. Nke a pụrụ inyere dị ka mma.
3. Gbalịa na jikọọ na gị iPhone ka iTunes na-ahụ ma ọ bụrụ na mgbake mode nhọrọ amama elu. Ka iTunes naghachi gị iPhone na ahụ na-agbalị na weghachite ndabere.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị nkịtị mbipụta chere ihu iPhone ọrụ na ekele iCloud mmekọrịta. Na isi ihe ndị a, ị ga-enwe ike iji aka ha na-apt n'ụzọ.
> Resource> iCloud> Olee otú Iji Idozi Common iCloud mmekọrịta Issues?